Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.5.6 Final design iseluleko
Ngaphandle kwalezi zimiso ezinhlanu ezijwayelekile zokuklama, ngingathanda ukunikeza ezinye izingcezu zeseluleko. Okokuqala, ukusabela okusheshayo ongase uhlangabezane nakho lapho uphakamisa uhlelo lokubambisana okukhulu "Akukho muntu ozobamba iqhaza." Yiqiniso lokho kungase kuqiniswe. Eqinisweni, ukungabi nxaxheba kungengozi enkulu yokuthi amaphrojekthi abambiswano abambisana nawo. Noma kunjalo, lokhu kuphikisana ngokuvamile kuvela ekucabangeni ngesimo ngendlela engafanele. Abantu abaningi baqala ngokwabo futhi baphuma: "Ngimatasa; Ngeke ngikwenze lokho. Futhi angazi noma ubani ozokwenza lokho. Ngakho-ke, akekho ozokwenza lokho. "Esikhundleni sokuqala ngokwakho nokusebenza ngaphandle, kufanele uqale nabo bonke abantu abaxhunyiwe kwi-inthanethi futhi basebenze. Uma ngabe eyodwa kuphela kwabayisigidi balaba bantu iqhaza, iphrojekthi yakho kungaba impumelelo. Kodwa, uma umuntu oyedwa kuphela kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ebamba iqhaza, khona-ke iphrojekthi yakho cishe izoba ukwehluleka. Njengoba intukuthelo yethu ayikuhle ukuhlukanisa phakathi kweyodwa kuya kwezigidi kanye nenye-in-a-bhiliyoni, kufanele sivume ukuthi kunzima ukwazi ukuthi amaphrojekthi azokwenza ukuthatha iqhaza okwanele.
Ukwenza lokhu kukhonjiswe okwengeziwe, ake sibuyele ku-Galaxy Zoo. Cabanga ngoKevin Schawinski noChris Linton, ababili bezinkanyezi abahlezi emaphakathini e-Oxford bacabanga ngeGalaxy Zoo. Babengeke baqagele-futhi bebengakaze baqagele-ukuthi u-Aida Berges, umama oneminyaka engu-2 ohlala ePuerto Rico, uzophela ekuhlukaniseni izikhulu zezinkanyezi ngesonto (Masters 2009) . Noma cabanga ngesimo sikaDavid Baker, isazi samakhemikhali esisebenza eSattle esakha iFoldit. Wayengeke alindele ukuthi othile waseMcKinney, eTexas ogama lakhe linguScott "amabhuzu" uZaccanelli, owayesebenza emini njengomthengi wefektri ye-valve, wayezochitha ubusuku bakhe ukubopha amaprotheni, ekugcineni aphakamise inombolo yezinombolo eziyisithupha kuFoldit, futhi UZaccaenlli wayezohambisa umklamo we-fibronectin efana no-Baker neqembu lakhe, ngokufaka umdlalo wakhe, bethola ukuthi bathembisa ukuthi bayanquma ukwenza umsebenzi wabo (Hand 2010) . Yiqiniso, u-Aida Berges noScott Zaccanelli bangamabhayisikili, kodwa yilokho amandla e-Intanethi: ngezigidigidi zabantu, kuyinto evamile ukuthola izakhiwo ezingenasidingo.
Okwesibili, kunikezwe lobunzima ngokubikezela ukubamba iqhaza, ngithanda ukukukhumbuza ukuthi ukudala iphrojekthi yokubambisana okukhulu kungaba yingozi. Ungatshala umzamo omkhulu wokwakha isistimu engekho ozoyisebenzisa. Isibonelo, u-Edward Castronova-umcwaningi ohamba phambili emkhakheni wezomnotho wezwe elizungezile, ohlomile nge-$ 250,000 evela ku-MacArthur Foundation, futhi esekelwa iqembu labathuthukisi-wachitha cishe iminyaka emibili ezama ukwakha izwe elibonakalayo ngaphakathi ingaqhuba ukuhlolwa kwezomnotho. Ekugcineni, wonke umzamo wawuhluleka ngoba akekho owayefuna ukudlala emhlabeni we-Castonova; kwakungeyona neze injabulo enkulu (Baker 2008) .
Njengoba kunikezwe ukungaqiniseki mayelana nokuhlanganyela, okulukhuni ukuqeda, ngiphakamisa ukuthi uzame ukusebenzisa amasu okuqala aqalayo (Blank 2013) : ukwakha ama-prototypes alula usebenzisa isofthiwe esesisitfombeni bese ubona ukuthi ungabonisa yini ukuthi uphila ngaphambi kokutshala imali yentuthuko yesofthiwe yangokwezifiso. Ngamanye amazwi, uma uqala ukuhlolwa kokushayela, iphrojekthi yakho ngeke-futhi ayifanele-ibonakale ifakwe njenge-Galaxy Zoo noma i-eBird. Lawa maphrojekthi, njengamanje, yimiphumela yeminyaka yokuzama amaqembu amakhulu. Uma iphrojekthi yakho ihluleka-futhi lokho kungenzeka-khona-ke ufuna ukuhluleka ngokushesha.